Manapaka i Myanmar : Lahatsary 4 Hanampiana Anao Hahafantatra Ny Fifidianana Hoavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2015 2:52 GMT
Eto ambany, ny Ma Ba Tha vondrona Bodista nasionalista mankalaza ny nahalàny ireo “Lalàna efatra Fiarovana ny Foko sy ny Finoana”, izay manilika tsara mihitsy ireo Miozolmana maro ao Myanmar tsy ho afaka mifidy. Raha miaraka amin'ireo hadisoana anaty lisitry ny mpifidy, vinaina ho eo amin'ny 4 tapitrisa eo ireo olompirenena tsy ho afaka hifidy manerana ny firenena.
Mifanakalo hevitra momba ireo tetikady samihafa ampiasain'ny antoko eo amin'ny fitondràna sy ny mpanohitra ilay fandahàrana miresaka sosialy sy politika, Dateline Irrawaddy, anatinà tontolo iray izay tsy afaka ialàna mihitsy ny fifandraisan'ny finoana sy ny politika. Tany am-piandohan'ity taona ity ny fandaharana dia nitafatafa tamin'ny Filohan'ny Kaomisiona misahana ny Fifidianana, momba ny fitokisana azo omena ilay hazakazaka ho amin'ny fifidianana.
Raha maridrefy ireo lahatsary etsy ambony, mbola lavitra sy sarotra ny dian'i Myanmar ho any amin'ny demaokrasia.